Global Voices teny Malagasy » Fanamby Ranon-tsira, Mandingana Sakafo sy #DignityStrike: Maneho Firaisankina Amin’ireo Gadra Mitokona Tsy Hisakafo Ny Palestiniana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Mey 2017 5:12 GMT 1	 · Mpanoratra منار يونس Nandika (en) i Rawan Gharib, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Israely, Palestina, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Sary: pejy fanentanana Solidarity with Prisoners  , Facebook.
Isan-taona isaky ny 17 Aprily, mankalaza ny Andron'ny Gadra Palestiniana  ny Palestiniana ao anatin'i Palestina sy ny any am-pielezana mba hihazonana ny fankalazana sy ho fantatr'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fisarihana ny saina manoloana ny fijalian'ireo gadra Palestiniana sy mampiseho ny fandikan-dalàna mihatra amin'izy ireo ao anatin'ny fonja Israeliana .
Tamin'ity taona ity, miaraka amin'ny Andron'ny Gadra Palestiniana, gadra Palestiniana 1500  (nitombo 1580 ny isa taty aoriana) amin'ireo gadra 6500 no niara-niditra tamin'ny fitokonana tsy hihinan-kanina. Nanambara ny fitokonan'izy ireo ao amin'ny fonja Hadarim ireo voafonja avy amin'ny vondrona Palestiniana samihafa.
Vokatry ny tsy firaharahian'ny Sampan-draharahan'ny Fonja Israely  (IPS) mandrakariva ny fitakian'ny gadra, izay tsy inona fa ny zo fototra voalazan'ny fifanarahana iraisampirenena, indrindra ny Fifanarahana tao Geneva no anton'ny fanambarana. Saingy mbola nanapa-kevitra hampitombo ny fepetra famoretana sy ny fanararaotana ny voafonja ny IPS, tsy manome ny zon'ny gadra sy manao tsindry ara-tsaina lehibe amin'izy ireo.
Nampahafantatra ny fitakiany ny mpitarika ny fitokonana tamin'ny Alahady 16 Aprily, iray andro mialoha ny fitokonana, mba ahafantaran'ny IPS fa tsy hifarana ny fitokonana raha tsy voavaly ireo fitakiana manaraka ireto :
1- Hatsahatra ny fanokanan-toerana
2- Hatsahatra ny fisamborana ara-panjakana
3- Hatsaraina ny fiveloman'ny gadra, ka anisan'izany ny:
– Finday iraisana isaky ny fonja sy toby mba ahafahan'ny fonja mifandray amin'ny fianakavian'izy ireo.
– Fantsona zanabolana 18 farafahakeliny araka izay ilain'ny gadra.
– Fitaovana fikopakopahana, fitaovana mampangatsiatsiaka sy manafana.
– Lakozia sy fanaova-mofo apetraka indray isaky ny fonja ary ny gadra misahana ny fiarovana no manara-maso azy, ary havela hividy zavatra eny amin'ny fivarotana entana madinika ny gadra.
4- Politikan'ny Fitsidihana:
– Averina ny famelàna ny fitsidihana faharoa. Satria natsahatra ankehitriny ny fitsidihana faharoa.
– Fahazoana mitsidika ara-potoana isaky ny tapa-bolana ary hamorain'ireo sampana rehetra, indrindra ho an'ny gadran'i Gaza.
– Tsy sakanana hitsidika ny fonja mihitsy ny havana akaiky.
– Hitarina 90 minitra ny fotoam-pitsidihana raha 45 minitra izany teo aloha.
– Avela haka sary miaraka amin'ny fianakavian'izy ireo isaky ny telo volana ny gadra.
– Manome fotodrafitrasa eo anoloan'ny vavahadin'ny fonja mba ho ampiasain'ireo fianakaviana hitsidika sy hiantohana fa mahatsiaro tsy voahelingelina izy ireo mandritra ny fotoam-pitsidihana.
– Manome alalana ny ankizy sy ny zafikely latsaky ny 16 taona hitsidika.
– Manome alalana ny mpitsidika mba hitondra boky, gazety, akanjo sy sakafo ary fananana manokan'ny gadra mandritra ny fitsidihana.
5- Politikan'ny Fitsaboana:
– Atsahatra ny fanaovana antsirambina ny fitsaboana .
– Fanakatonana ny Hopitalin'ny Fonja Ramle noho ny tsy fanomezana fitsaboana ilaina ho an'ny voafonja.
– Fizaham-pahasalamana ara-potoana ho an'ny gadra.
– Fepetra haingana amin'ny aretina atahorana sy fanatontosàna fandidiana ara-potoana.
– Avela hitsabo ny dokotera manam-pahaizana avy any ivelany.
– Famotsorana ireo gadra sembana sy manana aretina mitaiza.
– Iantohana ny fandaniana amin'ny fitsaboana ny gadra.
– Karakaraina amin'ny fomba manaja ny maha-olona ny gadra mandritra ny fitaterana azy ireo amin'ny fiara iombonana.
– Averina any am-ponja ny gadra rehefa avy eny amin'ny toeram-pitsaboana na fitsarana fa tsy tazonina any amin'ny toerana fanarahamaso.
– Arindra mba hanaja ny maha-olombelona ny toerana fanarahamaso ary manome sakafo.
– Mamaly ny filàna sy ny fangatahan'ny gadra vehivavy Palestiniana mba ho taterina amin'ny fiara manokana sy hifandray mivantana amin'ny mpitsidika mandritra ny oram-pitsidihana, ankoatra ny hafa.
– Afaka manohy ny fianarana any amin'ny Oniversite Hebreo Misokatra.
– Avela hiatrika fanadinana any amin'ny kolejy amin'ny fomba ofisialy na nalamina mialoha miaraka amin'ny fanjakana ny voafonja.
Tamin'ny endrika isan-karazany ny firaisankina tamin'ny gadra teo amin'ireo olom-pirenena Palestiniana. Manomboka amin'ny fametrahana tranolay tao afovoan-tanàna sy ny tanànan'ny governorà Palestiniana rehetra, hatramin'ny fanatontosàna fanentanana tao amin'ny sehatra media sosialy sy manome vaovao sy tatitra momba ny gadra, ary tao koa ny lanonana sy diabe ofisialy nataon'ny fiarahamonina.
Nalaza tao amin'ny sehatra media sosialy rehetra ny #DignityStrike , amin'ny fanasana sy lahatsoratra miantso firaisankina amin'ny gadra amin'ny fomba isan-karazany. Iray amin'izany ny Water and Salt Challenge (Fanamby Rano sy Sira), izay rano fisotron'ireo gadra mitokona mba hisorohana ny taovan'izy ireo tsy ho lò, indrindra fa mitombo ny filàna ara-tsakafo. Anisan'ny fomba hafa ihany koa ny fizarana lahatsary sy lahatsoratra fanohanana sy famoronana kisarisary maneho ny fitokonana sy ny tanjony, ankoatra ny hafa.
Nandritra ny dingana miavaka sy ny andrana vaovao maka tahaka ny zavatra iainan'ny gadra amin'ny fitokonana, natomboky ny vondrona tanora mpikatroka Palestiniana ny hetsika Firaisankina amin'ny Gadra  ho fanohanana ny fiorenan'ireo gadra amin'ny tolon'izy ireo.
Nisafidy hampiasa ny fomba “fakan-tahaka” ho fanehoana firaisankina amin'ireo voafonja ny mpikatroka, amin'ny alalan'ny fandinganana sakafo iray na mihoatra isan'andro, ary avy eo mihantsy olona iray hafa mba hanao toy izany koa ary tahaka izany foana. Tokony hanampy hampiely ny hetsika firaisankina hiparitaka araka izay azo atao ao an-toerana sy manerantany izany.
Natomboka tamin'ny Alakamisy 27 Aprily ny fanentanana, miaraka amin'ny fanambaran'i Mohammed Alyan, rain'ilay maritiora Bahaa Alyan, fitokonana tsy hihinan-kanina mandritra ny tontolo andro tamin'ny alalan'ny lahatsary noraketiny manokana ho an'ny hetsika.
Maro ireo olo-malaza Palestiniana sy Arabo naneho ny firaisankinany miaraka amin'ny voafonja, anisan'izany ireo mpiandraikitra ny gadra toa an'i Ahmed Qa'bour,, Karim Yunis, Zahi Wahbi sy Ahmad al-Dari. Antenaina hiparitaka sy hihitatra ny fanentanana, hiteraka fifamaliana asa amin'ny antso ho an'ny fakan-tahaka hitokona tsy hihinan-kanina.
Afaka manatevin-daharana ny fanentanana ianao mba hampitombo ny isan'ny mpikatroka firaisankina, miara mandray dingana tsikelikely ho fanoherana ny hamafy loha sy ny avonavon'i Israely mba hamarana izao andiana fanitsakitsahana ny zon'ny gadra izao
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/11/99312/
 Solidarity with Prisoners: https://www.facebook.com/Solidarity.with.Prisoners/?fref=ts
 Andron'ny Gadra Palestiniana: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
 gadra Palestiniana 1500: http://ramallah.news/post/79532/1500-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
 Sampan-draharahan'ny Fonja Israely: https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Prison_Service
 Fifanarahana tao Geneva : https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Convention_(1929)
 fitakiana manaraka ireto: http://samanews.ps/ar/post/300198/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
 fanentanana : https://www.facebook.com/Solidarity.with.Prisoners/